ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသည့်ဆီးချိုရောဂါအတွက်သိကောင်းစရာ ၅ ချက် - News-Sinocare
ဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်ပွားမှုအောက်တွင်ဆီးချိုရောဂါအတွက်သိကောင်းစရာ ၅ ချက်
အချိန်: 2020-03-01 Hits: 196
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက်နေ့တွင်အမျိုးသားကျန်းမာရေးကော်မရှင်သည် coronavirus ဝတ္ထုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောရောဂါ၏တရားဝင်အင်္ဂလိပ်အမည်ကိုကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှဖန်တီးခဲ့သောခေါင်းစဉ်ကိုပြောင်းလဲလိုက်သည်။
ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုသည် ၃ လကျော်ကြာခဲ့သော်လည်းရောဂါပျံ့နှံ့မှုကိုထိန်းချုပ်ရန်ယခုအချိန်ထိထိန်းချုပ်ထားဆဲဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်အခြားနိုင်ငံများဖြစ်သောဂျပန်၊ တောင်ကိုရီးယား၊ အီရန်စသည့်နိုင်ငံများတွင်ရောဂါကူးစက်မှုများပြားလာသည်။
အမျိုးသားကျန်းမာရေးကော်မရှင်မှထုတ်ပြန်သောသေဆုံးမှုများအနက်အများစုမှာဆီးချိုရောဂါအပါအဝင်နာတာရှည်ရောဂါများရှိသက်ကြီးရွယ်အိုလူနာများဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဆီးချိုရောဂါသည်အချိန်ကြာမြင့်စွာ hyperglycemia အခြေအနေတွင်ရှိနေသောကြောင့်ပလာစမာ osmotic ဖိအားတိုးပွားလာသည်၊ သွေးဖြူဥများ၏အဟန့်အတားများကိုတားဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးခန္ဓာကိုယ်၏ကိုယ်ခံအားစနစ်ကငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ ဗိုင်းရပ်စ် ရောဂါကူးစက်။
1. လုံလောက်သောဆေးဝါးများသည်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သည်၊ ဥပမာဆေးဝါးများ၊ သွေးဂလူးကို့စ်စစ်ဆေးမှုအစရှိသည့်အင်ဆူလင်ဆေးထိုးအပ်များစသဖြင့်ဖြစ်သည်။
ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအောက်တွင်ဆေးရုံသို့အလည်အပတ်ရောက်သည့်ရောဂါကူးစက်မှုအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်နှင့်လူအုပ်ကြီးကိုရှောင်ရှားရန်လူနာများစွာသည်သူတို့၏ဆေးဝါးများကိုအသည်းအသန်ရပ်ဆိုင်းခြင်းခံရနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ဆီးချိုရောဂါ ketoacidosis နှင့်အခြားစူးရှရှုပ်ထွေးမှုများကိုဖြစ်စေနိုင်သည့်အန္တရာယ်ကိုများစွာမြင့်တက်စေနိုင်သည်။ ပုံမှန်ဆေးဝါးသည်ဂလူးကို့စ်အဆက်မပြတ်ထိန်းချုပ်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်အတွက်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဗိုင်းရပ်စ်.
ဆီးချိုရောဂါကို ၂ ပတ်မှ ၄ ပတ်ကြာဆေးဝါးများအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရန်နှင့်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ရန်အကြံပြုသင့်သည်။
2. ရေရှည်နှင့်တည်ငြိမ်သောသွေးထဲရှိဂလူးကို့စ်ပမာဏကိုသတ်မှတ်ထားသောအကွာအဝေးအတွင်းထိန်းချုပ်ရန်အတွက်ဆီးချိုရောဂါအတွက်အချိန်ကိုက်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းသည်ဆီးချိုရောဂါအတွက်အဓိက ဦး စားပေးဖြစ်ပြီး၊ အိမ်တွင်ပုံမှန်သွေးစစ်ဆေးခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။
အကယ်၍ သွေးထဲရှိဂလူးကို့စ်ပမာဏကိုထိန်းချုပ်ထားပါက FPG နှင့် 2hPG စစ်ဆေးမှုများကိုတစ်ပတ်လျှင်အနည်းဆုံး ၁ ရက် - ၁ ရက်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ သွေးထဲရှိဂလူးကို့စ်ပမာဏသည်အနည်းငယ်ထိန်းချုပ်မှုမရှိလျှင်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန်လိုအပ်ပြီး၊ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးများကိုလည်းချိန်ညှိရန်လိုအပ်ပြီးသွေးထဲရှိဂလူးကို့စ်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်အေးဆေးတည်ငြိမ်အောင်ပြန်ထားရန်လိုအပ်သည်။
တိုင်းတာမှုအပြင်၎င်းတို့သည်သူတို့၏သွေးဂလူးကို့စ်စစ်ဆေးမှုရလဒ်များကိုလည်းမှတ်တမ်းတင်သင့်သည်။ သူတို့မထွက်နိုင်သည့်အချိန်တွင်သူတို့ဖုန်းများသို့မဟုတ်စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများမှတဆင့်သူတို့၏ဆရာ ၀ န်များအားသူတို့၏သွေးဂလူးကို့စ်အကြောင်းအသိပေးသင့်သည်။ သူတို့သည်ဂလူးကို့စ်ပြောင်းလဲခြင်းကိုလျစ်လျူမရှုသင့်ပါ။
3. မှန်ကန်သောပိုးသန့်ဆေးပစ္စည်းများရွေးချယ်ရန်အိမ်၌ပိုးသန့်ဆေးကိုကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ပါ။ ဗိုင်းရပ်စ်သည်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်နှင့်အပူကိုထိခိုက်နိုင်သည်၊ ၅၆ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင်မိနစ် ၃၀၊ အီသိုင်းအီ၊ ၇၅% အီသနော၊ ပိုးသတ်ဆေး၊ ပါအောက်စီစီအက်စစ်နှင့်ကလိုဖိုနှင့်အခြား lipid အရည်များပါ ၀ င်သောဗိုင်းရပ်စ်ကိုထိထိရောက်ရောက်ဖျက်ဆီးနိုင်သည်။ ဗိုင်းရပ်စ်။
4. တိုက်ခိုက်ကြ ဗိုင်းရပ်စ်, ထိရောက်မှုအရှိဆုံးနည်းလမ်းမှာရောဂါကူးစက်မှုကိုရပ်တန့်ရန်နှင့်အိမ်မှအချိန်ကွာဝေးစေရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ သင်ထွက်သွားသည့်အခါမျက်နှာဖုံးစွပ်ထားခြင်းကိုမှတ်မိပြီးအိမ်ပြန်ပြီးနောက်ပိုးမွှားကူးစက်မှုပြုလုပ်သင့်သည်၊ ရောဂါကူးစက်မှုဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကိုတားဆီးနိုင်သည်၊
5. အာဟာရနှင့်ကျန်းမာသောအစားအစာများဖြစ်ရန်၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းနှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာထိုင်ခြင်းမှရှောင်ရှားရန်အာရုံစိုက်ပါ။ လေ့ကျင့်ခန်းသည်ဂလူးကို့စ်အားထိန်းချုပ်မှုအောက်ရှိအင်ဆူလင်အာရုံခံနိုင်စွမ်းကိုတိုးမြှင့်စေရန်နှင့်ဂလူးကို့စ်နှင့်အခြားဘိုဟိုက်ဒရိတ်တို့၏ဇီဝြဖစ်စမှုများကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည့်အဓိကအချက်များဖြစ်သည်။ လူလတ်ပိုင်းနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများဆီးချိုရောဂါဝေဒနာသည်များသည်အခန်းတစ်ခန်းစီတွင် ၁၅ မိနစ်မှမိနစ် ၃၀ အထိလမ်းလျှောက်နိုင်သည်။ အိမ်မှုကိစ္စလုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ကလေးနှင့်ကစားခြင်းစသည်တို့မစခင်အထိစိတ်ကူးကောင်းများဖြစ်လာသည်။
၎င်းသည်အိမ်တွင်းသွေးဂလူးကို့စ်အားစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း၊ သိပ္ပံနည်းကျအဆုတ်ရောင်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုသိပ္ပံနည်းကျကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်း၊ ဆေးရုံသို့အလည်အပတ်ခရီးများလျှော့ချခြင်းနှင့်ကျန်းမာရေးအတွက်အန္တရာယ်များသည့်လက္ခဏာများနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကိုအချိန်မီဖော်ထုတ်ခြင်းသည်ပထမအဆင့်ဆေးသမားများအတွက်အကောင်းဆုံးအထောက်အပံ့ဖြစ်သည်။ ကုသမှု။
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် Coronavirus ၀ တ္ထုအသစ်ကိုထိန်းချုပ်ရန်ခက်ခဲသောအားထုတ်မှုများပြုလုပ်ပြီးအပြုသဘောဆောင်။ တာဝန်သိသောသဘောထားကိုပြသနေသမျှကာလပတ်လုံးကျွန်ုပ်တို့သည်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးကိုမကြာမီအနိုင်ရရှိလိမ့်မည်။
ယခင်စာမျက်နှာ Sinocare SARS-CoV-2 Antibody Test Strip အတွက်အဖြေများ